फोक्सोको क्यान्सरले निम्त्याउने समस्याहरु #Lungscancer • Health News Nepal
✍️ डा. विश्वाश शर्मा
फोक्सोको क्यान्सर फोक्सोबाट उत्पन्न हुन्छ। धुम्रपानलाई फोक्सोको क्यान्सरको सम्भावित कारण मानिन्छ । सुर्तिमा पाइने निकोटिन र टारलाई क्यान्सर गराउने मानिन्छ ।
धुम्रपान गर्दा, निकोटिन र टार फोक्सोमा अवशेषको रूपमा रहन्छ, समयको अवधिमा तिनीहरूले फोक्सोमा क्यान्सर कोशिकाहरूको गठनलाई ट्रिगर गर्दछ। धुम्रपान छाडेका मानिसहरूमा पनि फोक्सोको क्यान्सर हुन सक्छ।
फोक्सोको क्यान्सरको प्रारम्भिक चरणमा कुनै लक्षण देखिँदैन, तर फोक्सोको क्यान्सरका लक्षणहरू उन्नत चरणमा मात्रै देखिने गर्छन्। फोक्सोको क्यान्सरको लक्षण यदि यी मध्ये कुनै पनि लक्षण देखिएमा, विशेषज्ञ सल्लाह र सुझावहरूको लागि डाक्टरसँग परामर्श लिनु राम्रो हुन्छ। चिकित्सकले तपाइँको धुम्रपान बानी, अवधि र प्रति दिन चुरोटको बारेमा प्रश्नहरू राख्छन्। साथै खोकी र छाती दुख्ने, घरघराहट र वजन घटाउने जस्ता अन्य लक्षणहरूको बारेमा पनि सोधपुछ गर्दछ। सङ्कलन गरिएको जानकारीबाट चिकित्सकले प्रत्येक बिरामीको लागि निदान र औषधिको पाठ्यक्रममा निर्णय गर्दछ।
अधिकांश अवस्थामा धुम्रपान फोक्सोको क्यान्सरको कारण मानिन्छ। धुम्रपान प्रत्यक्ष हुन सक्छ, साथै लामो समयसम्म धुम्रपान गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि चुरोटको धुवाँमा क्यान्सर गराउने तत्व (कार्सिनोजेन) हुन्छ।
धुम्रपानले फोक्सोको अस्तरलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ र क्यान्सर निम्त्याउँछ। शरीरको प्रतिरोधी संयन्त्रले धुवाँ र त्यसका हानिकारक पदार्थहरूसँग लड्न मद्दत गर्छ। यद्यपि, लामो समयसम्म धुम्रपानको लागि फोक्सोको जोखिमले फोक्सोमा बारहमासी क्षति पुर्‍याउँछ, जसलाई फोक्सोको क्यान्सरको रूपमा हेरिन्छ।
फोक्सोको क्यान्सर दुई प्रकारको हुन्छ । सानो फोक्सोको क्यान्सर र गैर-सानो सेल फोक्सोको क्यान्सर। माइक्रोस्कोप अन्तर्गत फोक्सोको कोशिकाहरूको परीक्षणले डाक्टरलाई क्यान्सरको प्रकार र उपचारको पाठ्यक्रमको बारेमा निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ।
धुम्रपान फोक्सोको क्यान्सरको सम्भावित कारण हो। क्यान्सरको लागि अन्य जोखिम कारकहरू, सेकेन्ड ह्यान्ड धुम्रपान (सिगरेटको धुवाँको जोखिम), रेडोन ग्यास, एस्बेस्टोस र कार्सिनोजेन्सको जोखिम र फोक्सोको क्यान्सरको पारिवारिक इतिहास समावेश गर्दछ। माटो, चट्टान र पानीमा युरेनियमको विघटनबाट रेडोन ग्यास उत्पादन हुन्छ। रेडोन परीक्षण किटहरूले हावामा, घर र सार्वजनिक स्थानहरूमा रेडोनको उपस्थिति पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ।
Radon केवल अनुमति स्तरमा उपस्थित हुन सक्छ। यदि हावामा रेडोनको उपस्थिति सुरक्षित स्तर भन्दा बढि छ भने यसलाई तत्काल ध्यान दिन र सम्भावित उपचारहरू लिन आवश्यक छ। एस्बेस्टोस छाना भएका घरहरूमा बस्ने मानिसहरूलाई फोक्सोको क्यान्सर हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। एस्बेस्टोसमा आर्सेनिक, क्रोमियम र निकल पाइन्छ जसले लामो समयसम्म फोक्सोको क्यान्सरको जोखिम बढाउँछ।
परीक्षण र निदान:
धुम्रपान गर्ने बानी भएका मानिसहरूले फोक्सोको क्यान्सरको चरण जाँच गर्न वार्षिक कम्प्युटराइज्ड टोमोग्राफी (CT) स्क्यान गर्नुपर्छ। ५५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरू, धुम्रपान गर्ने बानी भएका व्यक्तिहरूलाई फोक्सोको क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुने भएकाले बढी होसियार हुनुपर्छ।
फोक्सोको क्यान्सर निदानको भागको रूपमा परीक्षणको तीन प्रकारको सुझाव दिइएको छ। छवि परीक्षणहरू जसमा सीटी स्क्यान र एक्स-रे समावेश छन्। स्पुटम साइटोलोजीले क्यान्सर कोशिकाहरूको सम्भावित उपस्थितिको लागि माइक्रोस्कोप मुनि थूकको अध्ययन गर्दछ। फोक्सो कोशिकाहरूको बायोप्सीले क्यान्सरको उपस्थिति र यसको विकासको चरण जान्न मद्दत गर्दछ। ब्रोकोस्कोपले डाक्टरलाई फोक्सोको असामान्य क्षेत्रहरू जाँच्न र मेडियास्टिनोस्कोपीले लिम्फ नोडहरूबाट ऊतक नमूनाहरू सङ्कलन गर्न घाँटीको आधारमा चीरा बनाउन मद्दत गर्दछ। सीटी स्क्यान र एक्स-रे छातीको पर्खालबाट सुईलाई मार्गदर्शन गर्न र शंकास्पद कक्षहरू सङ्कलन गर्न प्रयोग गरिन्छ।
फोक्सोको क्यान्सर कोशिकाहरूको अध्ययन गरेर मात्र फोक्सोको क्यान्सरको चरण निर्धारण गरिन्छ। फोक्सोको क्यान्सर मध्ये एक चरणमा, क्यान्सर कोशिकाहरू फोक्सोमा मात्र सीमित हुन्छन्। फोक्सोको क्यान्सरको दोस्रो चरणले क्यान्सर छातीको पर्खाल र डायाफ्राममा फैलिएको देखाउँछ। फोक्सोको क्यान्सरको तेस्रो चरणले लिम्फ नोड्समा सानो ट्युमरको उपस्थिति देखाउँछ। अन्तिम वा चौथो चरणमा क्यान्सर फोक्सोबाट शरीरका अन्य भागमा सर्ने गरेको देखिन्छ ।
उपचार र औषधिहरू:
क्यान्सरको चरणमा निर्भर गर्दै, उपचारको पाठ्यक्रम सिफारिस गरिएको छ। यसमा एक वा एकभन्दा बढी उपचारहरू समावेश हुन सक्छन्। केमोथेरापी, विकिरण थेरापी वा लक्षित औषधि थेरापी। फोक्सोको क्यान्सरको लागि शल्यक्रियामा फोक्सोको सानो भाग, ठूलो भाग, सम्पूर्ण लोब वा सम्पूर्ण फोक्सो हटाउन सकिन्छ। शल्यक्रिया गर्दा रगत बग्ने र संक्रमणको जोखिम हुन सक्छ, दुवैलाई तुरुन्तै विशेषज्ञ चिकित्सकको सल्लाहमा लिनुपर्छ।
फोक्सो शल्यक्रियाबाट हटाएपछि पनि सामान्य स्थितिमा फर्किन्छ। क्यान्सरको शल्यक्रिया पछि प्रारम्भिक रिकभरी एक श्वासप्रश्वास चिकित्सकको मार्गदर्शनमा उचित सास फेर्ने अभ्यासहरूद्वारा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। क्यान्सर उपचार प्रक्रिया अघि र पछि डाक्टरले प्यालिएटिभ हेरचाहको सुझाव दिन्छ। प्यालिएटिभ हेरचाहले फोक्सोको क्यान्सरका लक्षण र लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्छ।
Tags: Corona Virus #Covid19Dr. Bishwash SharmaLaung cancerNepal National hospital kalanki